China Eco-solvent Glitter Silver Printable PU Flex abavelisi kunye nabanikezeli |Alizarin
Khuphela & nee-FAQ
Iphepha le-Ink Jet Transfer
Iphepha le-Ink Jet Transfer (Iron-On)
Iphepha le-Ink Jet Transfer (itafile esikiweyo)
Iphepha lokuGqithisela kwiJet yeFomathi enkulu ye-Ink (itafile esikiweyo)
Iphepha lokuGqithisela ngoMbala weLaser
I-Flex yokuTshintshela ubushushu obunqanyuliweyo
Izishicileli zoSabelo eziGunyaziweyo
I-Eco-solvent Glitter Silver Printable PU Flex
Ikhowudi yeMveliso: HTS-300SGL
Igama leMveliso: I-Eco-Solvent Glitter yeSiliva eprintwayo PU Flex eneziphumo ezikhanyayo zinkwenkwezi
50cm X 30M / Roll.
Ukuhambelana kwe-Ink: I-inki yokunyibilika, i-Eco-Solvent Max inki, i-Mild Solvent inki, i-BS4 inki, i-Latex inki njl.
Buza kwi-Intanethi Khuphela iPDF
I-Eco-Solvent Glitter Silver Silver Printable PU Flex inokuprintwa ngazo zonke iintlobo zeeprinta ze-inkjet ze-Eco-Solvent, ufumane ukuqina okukhulu ngombala ogcina umfanekiso, hlamba-emva kokuhlamba.Ukuhlobisa ilaphu ngeefoto ngemizuzu.Innovative hot inyibilika inyibilika ilungele ukutshintshela kwizinto ezilukiweyo ezifana umqhaphu, imixube polyester / umqhaphu kunye polyester/acrylic, Nayiloni/Spandex njalo njalo. ngomatshini wokucinezela ubushushu.Ilungele ukwenza iT-shirts ezimnyama, okanye ezinemibala ekhanyayo, iibhegi zeseyile, ukunxiba kwezemidlalo kunye nokuzonwabisa, iyunifomu, ukunxiba ibhayisekile, amanqaku okuthengisa kunye nokunye.ngomqolo umenyezelayo we-PU Flex eprintwayo, emva kokuprintwa kunye nokudluliselwa, umbala uya kutshintshwa kunye nesiphumo sesinyithi esimenyezelayo.
■ Lungiselela ilaphu ngeefoto ozithandayo kunye nemizobo yombala.
■ Yenzelwe iziphumo ezicacileyo kwilaphu elidityanisiweyo elimnyama, elimhlophe okanye elikhanyayo okanye umqhaphu/ipolyester.
■ Ilungele ukwenza iiT-shirts, iibhegi zeseyile, iibhegi zeseyile, iiyunifomu, iifoto ezikwieyile njl.njl.
■ Ihlambeke kakuhle kwaye igcine imibala
■ Ukubhetyebhetye ngakumbi kunye ne-elastic
Inokuprintwa ngazo zonke iintlobo zeeprinta ze-inkjet ze-Eco-Solvent ezifana: Roland Versa CAMM VS300i/540i, VersaStudio BN20, Mimaki JV3-75SP, Uniform SP-750C, kunye nabanye abashicileli be-inkjet be-Eco-solvent njl.
6.Ukuhanjiswa koxinzelelo lobushushu
1).Ukumisela umshicileli wokushisa kwi-165 ° C imizuzwana engama-25 usebenzisa uxinzelelo oluphakathi.
2).Lifudumeze ngokufutshane ilaphu imizuzwana emi-5 ukuqinisekisa ukuba ligudileyo ngokupheleleyo.
3).Shiya umfanekiso oprintiweyo ukuba wome malunga nemizuzu emi-5, unqumle umfanekiso ojikeleze imida.Gcoba umgca womfanekiso kwiphepha elixhasayo ngobumnene ngefilimu ye-polyester yokunamathela (TF-100).
4).Beka umgca womfanekiso ujonge phezulu kwilaphu ekujoliswe kulo
5).Beka ilaphu lomqhaphu kuyo.
6).Emva kokutshintshela i-25seonds, susa ilaphu lomqhaphu, emva koko upholise malunga nemizuzu emininzi, Khulula ifilimu encamathelayo yepolyester eqala ekoneni.
Hlamba ngaphakathi ngaphandle AMANZI ANGOBANDA.UNGAYISEBENZISI IBLEACH.Beka kwindawo yokomisa okanye uxhome ukuze wome ngoko nangoko.Nceda ungawoluli umfanekiso ogqithiselweyo okanye iT-shirt njengoko oku kunokubangela ukuqhekeka ukuba kwenzeke, Ukuba ukuqhekeka okanye ukushwabana kuyenzeka, nceda ubeke iphepha elinobungqina obunamafutha phezu kokudluliselwa kunye nobushushu okanye intsimbi imizuzwana embalwa uqinisekisa ukuba cinezela ngokuqinileyo kulo lonke ugqithiselo kwakhona.
Nceda ukhumbule ukuba ungaayini ngokuthe ngqo kumphezulu womfanekiso.
Ukuphatha izinto eziphathekayo kunye nokugcinwa: iimeko ze-35-65% zokufuma okuhambelanayo kunye nobushushu be-10-30 ° C.
Ukugcinwa kweepakethi ezivulekileyo: Xa iipakethe ezivulekileyo zemidiya zingasetyenziswa, susa umqulu okanye amaphepha kumshicileli agubungele umqulu okanye amaphepha anengxowa yeplastiki ukuyikhusela kwizinto ezingcolisa, ukuba uyigcina ekupheleni, sebenzisa iplagi yokuphela. kunye ne-tape phantsi komphetho ukukhusela umonakalo kumda womqulu musa ukubeka izinto ezibukhali okanye ezinzima kwimiqulu engakhuselekanga kwaye ungayifaki.
Ngaphambili: I-Eco-solvent Brilliant Golden Printable PU Flex
Okulandelayo: Eco-Solvent InkJet iFilimu eNgaphandle
IVinyl eprintwayo ye-Eco-Solvent
I-Eco-solvent Brilliant Golden Printable PU Flex
I-Eco-solvent Dark Printable PU Flex
Copyright © 2022 Alizarin coating co. ltd |Onke amalungelo agciniwe